यसरी बढाउन सकिन्छ सम्भोग शक्ति (विधिसहित) – rastriyakhabar.com
८ चैत्र २०७८, मंगलवार ०५:५१
१. इन्द्रायणी बीउलाई पानमा मिलाएर खानाले वा गौमुखी फूलको चूर्णलार्ई सख्खरसँग मिलाएर नियमित सेवन गर्नाले वा घिउमा मह मिलाएर खानाले बी’र्य श’क्ति बढ्दछ ।
२. तित्रीको बीउलाई हल्का कुटी रातभरी पानीमा भिजाई बिहान खाली पेटमा नियमित खानाले वा वरको दानालाई छायामा सुकाएर पिसी १ चम्चा धूलोलाई गाईको दूधमा मिलाई दिनको २/३ पटक खानाले वा १/१ भाग बरको कोपिला र गुलरको बोक्रोमा २ भाग सख्खर मिलाई चूर्ण बनाउने र १०/२० ग्राम धुलोलाई दूधमा मिलाएर ३/४ हप्तासम्म सेवन गर्नाले वीर्य शक्ति बढ्दछ ।
३. तुलसीको वीउ कुटेर तयार पारिएको दुई चम्चा धुलोलाई दैनिक पानीमा हालेर खानाले वी’र्य गाढा–बाक्लो हुनुका साथै शक्ति प्रदान गर्नमा मद्दत पु¥याउँछ ।
४. सम्भव भए यार्सागुम्बाको सानो टुक्रा वा नभए शुद्ध शिलाजितलाई ताजा दूधसँग नियमित सेवन गर्नाले वा बोकाको गेडालाई घिउमा भुटेर खाने गरेमा वा माछा खाने गरेमा पनि संभोगशक्ति चौगुणा बढेर आउँछ ।
साभार : ‘हाम्रो घरको डाक्टर’ पुस्तकबाट
त्यस्तै, आम रूपमा मानिसको कपाल झर्ने समस्या देखिन्छ । धेरैले रोक्ने उपाय पनि अपनाइरहेका हुन्छन् । तर सन्तुष्ट भने देखिदैनन् । विशेषज्ञहरूले हरेक दिन ५० देखि १०० वटा कपाल झर्नु सामान्य रहेको बताउँछन् । यद्यपि सोभन्दा बढी कपाल झर्नु समस्या रहेको बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार कपाल झर्ने समस्या लिएर क्लिनिकमा जाँदा चिकित्सकले रगत परीक्षण गर्न सुझाउँछन् । उनीहरूले सीबीसी, भीआइटी डी३ लगायत परीक्षण गर्न सिफारिस गर्छन् ।
ती उपायभन्दा फरक र घरमै बसेर अपनाउन सकिने उपाय यस्ता छन् :
कसिलो गरी कपाल नबाँध्ने । ‘पोनिटेल स्टायल’मा कपाल नबाँध्ने । यसले कपाल कसिलो हुने र कपाल झर्नमा मद्दत पुर्‍याउने हुन्छ ।
रेशम वा नरम सिरानीको प्रयोग गर्ने । यसले गर्दा कपालमा दबाब कम पर्छ । कसिलो हुने कपालको ‘स्टायल’ नबनाउने । उपचारका नाममा अनेक किसिमका केमिकल प्रयोग नगर्ने ।
कपाललाई मिल्दो श्याम्पू तथा कन्डिशनर्सको प्रयोग गर्ने । कपाललाई फाइदा पुग्ने तेल हरेक दिन प्रयोग गर्ने । यसले कपाल वृद्धि हुने मात्र नभएर झर्ने समस्या पनि कम गर्छ । रातमा राम्रोसँग निदाउने तथा तनाव नलिने । त्यस्तै सन्तुलित भोजनमा विशेष ध्यान दिने ।